ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တွမ်ခရုဇ် နဲ့ ကျနော်”
I know the country you meant, as I lived there for quitealong time. You madeavery good point.With your great sense of humour, all your articles are so alive.Keep going!
ခေါင်းစဉ်လေးက ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ ဒီလိုရေးဟန်လေးတွေကပဲ ထူးခြားတဲ့ကိုပေါရဲ့styleပေါ့။
စင်ကျားပူမှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတာ..အခုမှအကြံရသွားတယ်...ဆင်းဒဝစ်မိတ်ကာ၊ ဂျု့စ်မိတ်ကာတို့ လို အခု ထရာဘယ်မိတ်ကာ လုပ်ရောင်းမလားလို့။
ညိုချောလေး....လီယိုနာဒို ဒါကိုပေါ တွမ်ခရုဇ်....
အရပ်အမောင်းတို့၊ ရုပ်တို့ကတော့ ပြောစရာရှိပါဘူးကွယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုက်လေးက နည်းနည်းထွက်တော့....ဆရာတော်ဦးဉာဏိဿရ ဟောတဲ့ ဘ၀တန်ဖိုး တရားကို သွားသတိရမိတယ်။ မာဂဏ္ဍီပရဗိုဇ်ကြီး ကဗိုက်လေးပုတ်ပုတ်ပြီး ဆိုတာ........။
ချတာနော်....ချိတ်ချိုးရဘူးနော်....လီယိုနာဒို ဒါကိုပေါ တွမ်ခရုဇ် ပရဗိုဇ်..အဲလေ..ယောင်လို့။
ဒီကနေ့ တွေ့ခဲ့သော ....
Anonymous<<<<<< Thank you for your support. :-) You know the country Huh? :-)
တန်ခူး>>>>>> ထူးခြားတဲ့ရေးဟန်ဆိုတာ နောက်တီးနောက်တောက် ရေးတာကို ပြောချင်တာလားဟင်..ငှင်..ငှင်...
ထနောင်း>>>>>> သင်တော့ ဆွမ်းဦးပုညရှင်...အဲလေဟုတ်ပေါင်...စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူမှာ စင်္ကာပူလူမျိုး ထရာဘယ်မိတ်ကာတွေ ရှိပြီးသား။ အီနပ်ဖ် လား.... အီနပ်ဖ် အော်ရယ်ဒီ...။
သင့်အမ>>>>> မာဂဏ္ဍီပရဗိုဇ်....တဲ့။ ဗိုက်ကလေး ပုတ်ပုတ်ပြီး.....တဲ့။ အံမယ်လေး....ရက်စက်ပါ့ အစ်မရာ....ကြေမွ၊ အမြဲတသ စွဲလန်းခဲ့တဲ့ တပွင့်တည်းသော ဗိုက်သစ္စာ... မြတ်နိုးထိုးစိုက် ကိုယ်အလုံးလိုက် ဆင်မြန်းဘို့ ရွယ်တာ....(၀င်းဦးအသံနှင့် သီဆိုပါရန်)
ကိုဖိုးတွမ်ပေါရေ.. အနော်တော့ သံချောင်းခေါက်ထားတယ်ဂျ
Although I can read your articles, I can not read the comments because of the font that I do not have. So, pls tell me the font that you are using. Thanks!
>>>>To Anonymous (2nd), we are using Zawgyi_One font. You can see the comments if you click on the topic. If you click on the comment (eg on7comments), you will just see the square blocks. Please click on the topic (eg click on the topic Tom Cruize and Me).
> “မဟုတ်ပါဘူး။ အကြံပေးရုံသက်သက်ပါ။ စိတ်မရှိပါနဲ့” ဆိုပြီး ပြန်ပြောတယ်။
They care about you so much. That's why they check up on you and give you suggestions :) :) :) Look on the bright side, huh? :)